Iska hor imaad Garbahaarey ku dhex maray ciidamo Itoobiyaan iyo Ciidamo Soomaali ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Iska hor imaad Garbahaarey ku dhex maray ciidamo Itoobiyaan iyo Ciidamo Soomaali ah
7th September 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Wararka ka imaanaya degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya inuu Iska hor imaad ku dhex maray ciidamo Itoobiyaan ah iyo ciidamo Ilaalo u ah Guddoomiyihii gobolka gedo Maxamed Cabdi Kaliil.
Iska hor imaadka ayaa yimid kadib markii Guddoomiyihii Gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil uu xalay soo galay magaalada Garbahaarey.
Hase yeeshee waxaa diiday imaanshaha guddoomiyaha gobolka Gedo maamulka uu u magacaabay gobolka Gedo Axmed Madoobe.
Ciidanka Itoobiya ee ku sugan magaalada Garbahaarey ayaa weerar ku qaaday guriga uu ka degenaa magaalada Garbahaareey guddoomiyaha gobolka Gedo ee dowlada Federalka Maxamed Cabdi Kaliil.
Lama oga khasaaraha ka dhashay iska horimaadkan hase yeeshee waxaa ay ciidamada Itoobiya ay ku guuleysan waayeen in ay qabtaan guddoomiye Kaliil.
Xaalada Garbahaarey ayaa ah mid kacsan, iyadoo dadweyne fara badan ay hor-dhoobteen Guriga Maxamed Cabdi Kaliil, iyagoo ka soo horjeeda isku day ay Ciidamada Itoobiya ku doonayaan inay ku xeraan.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland ayaa horay xilka uga qaaday Guddoomiyaha Gobolka Gedo Maxamed Kaliil,waxaana uu ku badalay Axmed Buule Maxamed.
Haweeney ka mid ah dadka deegaanka oo la hadashay Warbaahinta ayaa sheegtay in Ciidamada Itoobiya oo lix gaari wata ay guriga Maxamed Cabdi Kaliil soo weerareen, kuna hareereysan yihiin, si ay u xoreen, isla markaana ay dadka deegaanka hor-taagan yihiin.
“Ciidamada Itoobiya oo lix gaari wata ayaa soo weeraray Guriga Maxamed Cabdi Kaliil, weyna ku wareegsan yihiin, dadweynihii magaalada ayaa diidan nin bey noo soo magaceebeen oo Doolow ka keeneen, anagana waa hor-taagan nahay, in nala laayo ayaa diyaar u nahay”ayay tiri Haweeneydan la hadashay Warbaahinta.
Maxamed Cabdi Kaliil iyo siyaasiyiinta reer Gedo ayaa bishii hore laga musaafuriyay Gobolka Gedo, kadib markii heshiis iyaga iyo Maamulka Jubba ku dhex maray Doolow uu fashilmay, waxaana saraakiisha Gedo ay sheegeen in Ciidamada Itoobiya u hanjabeen, kuna wargeliyeen inay xirayaan hadii aanay gobolka ka bixin.
Degmada Garbahaarey ayaa tan iyo markii Maamul cusub loo soo magacaabay waxaa ka socday banaan bax looga soo horjeeday maamulkaas iyo xil ka qaadistii Maamulkii hore, waxaana taas keentay in magaalada bandow la geliyo, kadib xiisado hareeyay.
Ra’iisul Wasaare Cumar Xill cusub u magacaabey Maareeyaha Guud ee Mashruuca Horumarinta Xeebaha iyo Kaluumeysiga